SD oo doonaysa in xoogga la saaro isdhexgalka bulshadda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga Sverigedemokraterna oo saaka soo dhingay miisaaniyadoodii. sawir: Carl V Andersson/TT
SD oo doonaysa in xoogga la saaro isdhexgalka bulshadda
La daabacay onsdag 5 oktober 2016 kl 11.04
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa saaka soo bandhigay miisaaniyadii ay waddanka ku dhaqi lahaayeen hadii ay awooda gacanta ku dhigi lahaayeen. Isdhexgalka ajanibta ayaa ka mid ah qorshaha ay doonayaan in xooga la saaro.
Tusaalahan ayey ku talo jiraan in dadka waddanka ku cusubi qaataan waxbarasho xirfadeed si ay dhakhso ugu soo galaan suuqa shaqada. Sverigedemokraterna ayaa shaqobixiyaasha dadkan ka shaqaaleeysiiya lacag dheeraad ah siinaya sadexda sanno ee ugu horreeya. Halkaas ayey lacag gaadhaysa 4 bilyan oo koroon ku maalgelinayaan sannad walba.
Tan ayaa ka dhigaan in la joojin lahaa "nystartsjobben" oo ah nidaamka ay dawladdu u soo saartay dadka shaqo l´aantu haysay wakhti dheer.
Dhanka kale ayey Sverigedemokraterna qeeybsaneeyn fikirka mucaaradka oo ah in xisbigu haysan qorshe ku saabsan isdhexgalka bulshadda.
-Maaha fikir aan xisbiyadan la qeeybsanayno. In fikirkeeno ka duwan yahay xisbiyada kale kama dhigna in aanu haysan qorshe ku saabsan isdhexgalka bulshadda , ayuu sheegay afhayeenka dhaqaalaha ee xisbiga SD.
Ta kale ayaa ah in xisbigani doonayo in lacag gaadhaysa 650 milyan oo koroon ku maalgelinayaan boolisyadda waddanka. Kuwan ayaa dakhliga loo kordhin lahaa, hadii ay SD waddanka hogaamin laheeyd.
In kasta oo u xisbigani markii ay saaka soo bandhigayeen misaaniyada sheegeen in ay xooga saarayaan ajaanibta waddanka ku cusub iyo shaqo l´aanta kuwan haysa, ayey isla miisaaniyadan ku qorsheeyeen in la dhimo qaabilada qaxootiga.
Ugu dambeeyn ayuu xisbigani doonaya in canshuurta laga dhimo dadka hawlgabka ah ee pension-ka qaata.